juin 2018 - Page 2 sur 102 -
Belo sur Tsiribihina : Dahalo nodoran’ny fokonolona
Nisehoana fanafihan-dahalo indray tany amin’ny fokontany no sady kaominin’I Begidro, distrikan’I Belo sur Tsiribihina afak’omaly tokony tamin’ny 05 ora maraina. Nisy ny fanenjehana sy ny fanarahan-dia nataona miaramila miisa efatra niaraka tamin’ny fokonolona tany an-toerana …Tohiny
Mpampianatra : Nanakorontana ny fanomezana mari-boninahitra
Nokorontanin’ireo mpitokona ny fanomezana mari-boninahitra ireo nahavita be teo amin’ny asa fampianarana teny amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Tabataba, siotsioka no nasetrin’ireto milaza ho mpanabe ireo namany sy ireo tompon’andraikitra ambony ary mpanao gazety tonga nanotrona izany …Tohiny
Fivoahan’ ny datim-pifidianana : Eken’ireo mpisehatra rehetra, saingy……
Manoloana ny fivoahan’ ny datim-pifidianana dia nezahina ny naka ny hevitr’ireo mpisehatra amin’ny fifidianana , izany hoe ireo izay azo veroka ho kandida sy ireo antoko politika ary indrindra ny fiarahamonim-pirenena. Raha akapoka iray ny …Tohiny
Fanampim-bola amin’ny fifidianana : Mitohy ny fifandresen-dahatra
Lany omaly teny amin’ny antenimieram-pirenena izany iny ny tetibolam-panjakana, izay nasiam-panitsiana ho an’ny taona 2018, ary raha nojerena dia mbola tsy tafiditra anatin’ ity tetibola ity ny fangatahana vola fanampiny izay nangatahin’ ny CENI. Ny …Tohiny
Nampitandrina ireo olona tsy ankanavaka, indrindra ho an’izay efa namboly krizy teo aloha ireo mpitandro filaminana amin’ izao fotoana fiandrasana ny voka-pifidianana izao. “Ny mpitandro filaminana dia mampitandrina ny olona rehetra tsy an-kanavaka, izay mampiseho ...Tohiny